Kumazwe ahlukeneyo, Amaxabiso bitcoin ingahluka - Blockchain News
Kutheni ku amaxabiso kumazwe awahlukeneyo ukuba bitcoin zinokwahluka
Kuxhomekeka lizwe kunye crypto-exchange amazinga, ixabiso ngalinye asethi crypto ingahluka. Siye sahlolisisa izinto eziliqela enefuthe ukuyilwa amanani kwimarike crypto, nendlela ezinxulumene Indawo esikuyo abanikezeli cryptocurrency.
Okokuqala, oko into ekufaneleke ukuba siyicinge kukuba kusekho akukho meko eyamkelekileyo ngokusebenzisa cryptocurrency. Kuba abathile, isizathu zotyalo inkolelo ukuba kubulelwe cryptocurrency, ubuchwepheshe blockchain balindelwe ithuba lokukhula ngokukhawuleza. kwabanye, ngayo inkolelo yokuba ezo Bitcoins ukuba bathenga namhlanje kwixesha elizayo kuya kuba imfuno enkulu kubomi bemihla ngemihla. Kubo bonke abanye, yaye mhlawumbi ezininzi, isizathu ukuthenga bitcoin banqwenela ukwenza inzuzo.
kwakhona, sonke siyazi ukuba bitcoin asinayo ixabiso ozinzileyo, nguwo cryptocurrency amagunya kuqoqosho yedijithali lwehlabathi ukuba akukho exhaswa yi nayiphi na impahla, ungekho kunye nayiphi na imali eyake, yaye asiyiyo na imeko yehlabathi. kunjalo, Njengazo zonke iimpahla yabathengi, ixabiso bitcoin i luqokelelane ngokusekelwe kwaneliswe ifunwa. Ngamanye amazwi, amaxabiso cryptocurrency lokuqala hlabathi uzinzo ethile phakathi ixabiso ezinikezelwa nabathengisi kwaye oko abathengi bazimisele ukuba ahlawule.
Kukho amazwe apho urhwebo kunye cryptocurrencies akuvumelekanga, kunye bitcoin zingathengwa kuphela kubathengisi-kubathengisi ngqo, ubungajonganga ukutshintshiselana crypto-exchange. Umzekelo, emva kokuba interdiction kokutshintshiselana e China, umthamo imicimbi engekenziwa kwi p2p plattform of LocalBitcoins liye landa. Kumazwe amaninzi, ukuze bathenge bitcoin, kufuneka ukuba i-akhawunti yebhanki ikhadi lokuzazisa. Umzekelo, Regulator zemali South Korea uye wavalwa ngokomthetho iintengiselwano engaziwa, Ngoku abathengisi kufuneka kwakhona zibhalise akhawunti yenyani kwii-akhawunti ezinamagama real.
Ngenxa obekelwe kulawulo, abathengisa bitcoin kwi plattforms p2p ezifana LocalBitcoins uyakwazi ukucwangcisa i ixabiso olunyuswe kwaye uqiniseke ukuba abathengi uya kuhlawula ngayo. “Suppliers” of bitcoin zidla zimelwe ngokohlobo kwiinkampani bucala inani elikhulu bitcoins kunye nemali eyake, kwaye zilawule zabo kubathengi amancinci, ngokukodwa ukuba ummandla zifunwa ezinkulu cryptocurrencies. Umzekelo, e South Korea bitcoin yi-avareji $ 400 kuyabiza ngaphezu kwi US, kwaye umahluko ukuthengisa yaye bakwazi ukuthenga ukusuka $ 1800 ukuba $ 3000. in India, umthengisi bitcoin inika lwemali ngexabiso 20% ngaphezu koko ifakelwe kwimarike US. Umahluko kwixabiso yokuthengisa kunye nokuthengwa bitcoin in India lumalunga $ 1000. e China, izinga bitcoin yi $ 100 ngaphezulu kule US, kwaye lwemali buthengiswa nazuzwe umahluko ngomyinge $ 500. Ngaxeshanye, e Russia izinga bitcoin yi $ 100 eziphakathi malunga lilingane izinga cryptocurrency kwi amazwe EU, kwaye umahluko phakathi bid kunye nokuthengiswa mveliso malunga $ 400. Nangona kukho umahluko ezinjalo ixabiso, abathengisi uhlale abathengi abaye akukho ndlela yimbi ukuba ufuna ukungena World of Crypto.
Imarike ye crypto noko uselula kakhulu kwaye akukho namnye unako ukubona ukuba yintoni na indawo yokugqibela bitcoin na okanye yintoni na kwixesha elizayo lolu shishino izakujongeka. Kule market kukho ngoku inani elikhulu yabadlali aphile injongo eyodwa – ukwenza inzuzo. Kwaye oku kuthetha ukuba ngamini-nye abadlali abachanekileyo bayemka imarike, bethabathe nabo imali efunyenwe. Kodwa kule meko, kukho inzuzo lwesitshixo esinye – xa oku kusenzeka, imfuno kwande kuya kunciphisa zonke cryptocurrencies amaxabiso ukuya kwinqanaba elifanayo kuwo onke amazwe zonke iimarike. De kube oku kwenzeka, nje ndizama ukuzonwabisa kwenzeka ntoni, olawula kwi isiphithiphithi yangoku.
Amaxabiso Bitcoin ingahluka
Post Previous:Owayesakuba developers Blockstream ukudala supercomputer kwi blockchain
Post Next:Coinbase iqala uvavanyo lokugqibela Segwit
EyoMdumba 6, 2018 e 8:25 AM
UCanzibe 11, 2018 e 6:47 AM
Isilimela 26, 2018 e 6:06 AM